EXCLUSIVE: जनताको आँखामा छारो हालेर डिस होमले यसरि गर्दैछ 'झुट'को व्यापार !
ARCHIVE, COVER STORY, EXCLUSIVE, SPECIAL » EXCLUSIVE: जनताको आँखामा छारो हालेर डिस होमले यसरि गर्दैछ 'झुट'को व्यापार !
काठमाडौँ - अहिले तपाईंले कुनै नेपाली टेलिभिजन हेर्नुभयो भने एउटा विज्ञापन निकै आक्रामक रुपमा थुप्रै पटक बज्छ । विज्ञापन हो 'डिस होम' को । विज्ञापनमा भनिएको हुन्छ, 'बसीराखे एनलग टिभीको भरमा, च्यानल आउंदैन घरमा' । अझै केहि अनलाइनहरुमा त उसले बैसाख १५ गतेदेखि डीस होम जोड्नुको विकल्प छैन भन्ने विज्ञापन प्रकाशित गरिरहेको छ ।
यहि सोचेर वा सो विज्ञापन हेरेरै तपाईंपनि डीस होम जोड्ने मुडमा हुनुहुन्छ भने एकछिन पर्खार्नुहोस्, डिस होमले सरासर झुट बोलीरहेको छ । देशभर रहेका ५० लाखभन्दा बढी केवल टेलिभिजनका ग्राहकहरुको आँखामा डीस होमले छारो हालेको पछिल्लो नमुना मात्र हो सो विज्ञापन । ढुक्क हुनुहोस्, बैसाख १५ गतेदेखि डीस होम जोड्नुको विकल्प नभएको कुरा सरासर झुट हो भने तपाईंले राखीरहनु भएको केवल टेलिभिजन बन्द हुने हल्ला पनि केवल 'हल्ला' मात्र हो ।
केवल टेलिभिजननै डिजिटल हुने हो, डीस होम नै जरुरी छैन !
बैसाख १५ गतेदेखि डिजिटल प्रविधि नेपालका प्रमुख सहरहरुमा हुने सरकारी निर्णयपछी प्राइभेट केवल अपरेटरले एनालगवाट डिजिटलमा जान सुरु प्रकृया गरिसकेको नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका कार्यकारी निर्देशक विश्वेश्वर प्रसाद गौतमले बताए । अर्थ सरोकार डटकमसँग कुराकानी गर्दै उनले बैसाख १५ पछी च्यानल नै बन्द हुनेसम्मको हल्ला पिटेर गलत तरिकाले बजार प्रवर्धन गरिरहेका केखी कम्पनीहरुले रैबैया देखाईरहेको समेत दावी गरे । 'केवल टेलिभिजन बन्द हुने हुँदै होइन । तर आनो स्वार्थपूर्तिका लागि केहिले यस्तो हल्ला फिंजाएका छन् ।' उनले भने ।
डीसहोमको यो हदसम्मको दादागिरी !
डीस होम जोड्नुको विकल्प नभएको भन्दै कम्पनीले विभिन्न अनलाइनहरुमा विज्ञापन समेत गरिरहेको छ । केहि चर्चित मिडियालाई आफ्नो हातमा लिएर उसले आफ्नो झुट विकाइरहेको छ भने आफ्ना काला कर्तुतहरु लुकाईरहेको छ । 'डीस होमले मोटो रकम पेलेर टेलिभिजन र अनलाइनहरुमा डीस होम जोड्नुको विकल्प नहुने र हाल चलिरहेको केवलबाट च्यानल नै नआउने भन्दै भ्रामक विज्ञापन गरिरहेको छ ।' एक केवल संचालकले अर्थ सरोकार डटकमसँग कुराकानी गर्दै भने, 'हामीले कुरा त्यस्तो होइन भन्ने आशयको समाचार विभिन्न टेलिभिजनहरुमा स्क्रोल समेत गरिरहेका छौं । तर सो विज्ञापन बजाउने टेलिभिजनहरुलाई डीस होमबाट हटाइदिने चेतावनी दिएपछि उक्त टेलिभिजनहरुले हाम्रो सुचना प्रकाशन समेत गर्न छाडेका छन् ।'
डीस होमले विभिन्न मिडियाहरुमा प्रकाशित गर्दै आएको झुटो विज्ञापन
उनका अनुसार डीस होमले मनपरी ढंगबाट विभिन्न टेलिभिजन हटाउने गरेको छ । 'केहि समय अगाडी विभिन्न बहानामा न्यूज २४ हटाइयो । अहिले अरु नयाँ टिभीहरु हाल्न पनि उसले राम्रै बार्गेनिङ गर्ने गरेको छ । कतिपय टेलिभिजनसँग च्यानल राख्नकै लागि मोटो रकम पनि लिएको छ । यस्तै रबैया गरिरहेको डीस होमले अहिले केवल टेलिभिजनबारे भ्रम छर्ने प्रयास गरेको छ । बैसाख १५ उता केवल टेलिभिजननै बन्द हुने आशयको भ्रामक विज्ञापनलाइ उसले जोडतोडका साथ बजाएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रयास भएको छ । ' उनले अगाडी भने ।
सरकारी इन्जिनियर भन्छन्, 'केवल च्यानल बन्द हुने कुरा हल्ला मात्रै' !
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका केबल समन्वय शाखाका प्रमुख इञ्जिनियर अनिल भुजेलका अनुसार बैसाख १५ देखि सबै एनालग सिष्टमका टेलिभिजन च्यानलहरु बन्द हुने कुरा हल्ला मात्र हो । 'एनालग सिष्टममा रहेका टेलिभिजन च्यानलहरुलाई डिजिटल सिष्टममा लैजाने प्रक्रिया मात्र हो । केवल टेलिभिजनहरु बन्द हुन्छन् भन्ने होइन ।' उनले भने । उनका अनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले २०७४ को अन्त्यसम्म देशभरका टेलिभिजन एनालग सिस्टमबाट डिजिटल सिस्टममा लैजाने योजना बनाएको छ । 'योजना बनेको छ तर २०७५ बैसाख १५ गतेबाटनै एनालग हटाएर डिजिटलमा लैजाने कुरा पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा केही प्राविधिक र व्यवहारिक कठिनाईहरु छन् । तर प्रयास जारी छ ।
बैसाख १५ गतेबाट हुन लागेकोचाहिं के हो ?
सरकारले आगामी १५ वैशाखपछि नेपालका सबै केवल टेलिभिजन एनालग सिस्टमबाट डिजिटलमा जानुपर्ने नियम ल्याएको हो । यसो त यो नियम ल्याउन पनि डीस होमले मोटो रकम खर्च गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारमा लागेको समेत आरोप केहिले लगाएका छन् । यद्यपी यो निर्णय भइसकेको छ भने विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले उक्त प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् भने कहिले प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । सरकारले ल्याएको नयाँ नियमअनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौं, ललितपुर, वीरगञ्ज, बिराटनगर, पोखरा क्षेत्रका केबल टेलिभिजनह एनालग प्रविधिबाट डिजिटल प्रविधिमा जानेछन् । यसको अर्थ डीस होम नै जोड्नु पर्ने भन्ने होइन । तपाईंको टेलिभिजनमा आउने च्यानलको सिग्नल परिवर्तन भएर एनालग बाट डिजिटल हुने मात्र हो ।
अझै राम्रो आउनेछ केवल टेलिभिजन !
डिस होमले जस्तोसुकै भ्रामक विज्ञापन गरेपछि अब बैसाख १५ बाट केवल टेलिभिजनका सिग्नलहरु अझै राम्रो हुने नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका कार्यकारी निर्देशक विश्वेश्वर प्रसाद गौतमले बताए । 'हामी अझै राम्रो भएर आउंदैछौं । हामी सबै 'डिजिटल' हुँदैछौं । हरेक केवलका ग्राहकले बुझ्नुपर्छ कि बैसाख १५ बाट केवल टेलिभिजन च्यानल बन्द हुने होइन ।'
डीस होम मात्र होइन यी यी कम्पनीले पनि वितरण गर्छन डिजिटल सिग्नल !
डीस होम नै जोड्नुपर्छ भन्ने शैलीमा डीस होमले गलत प्रचार गरेपनि नेपालमा डिस होमका अलावा, सुबिसु केवल नेटले क्लियर टिभी, सिम्पल मिडिया नेटवर्कले सिम टिभी, स्काई केवल टिभीले स्काई केबल, कृतिदर्शन मिडियाले कृति केबल, डिजिटल अप्टिकल इन्टरटेन्मेन्ट नेटवर्कले डिओइएन केबल, डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्कले मेरो टिभी, केनेक्ट डिजिटलले कनेक्ट, स्मर्ट डिजिटल टिभीले स्मार्ट डिजिटल र हाम्रो टिभी नेटले हाम्रो टिभी कम्पनीको नाममा डिजिटल सिग्नल दिइरहेका छन् ।
सुदीप आचार्य सम्पर्कमा आएनन् !
यस विषयमा हामीले डीस होम सञ्चालक कम्पनी डीस मिडिया नेटवर्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदीप आचार्यलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौं । तर हामीले डीस मिडिया नेटवर्कले गरीरहेको झुटको खेतीबारे बुझ्न चाहेको थाहा पाएपछि उनी हामीसँग यसबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । हामीले पटक पटक उनलाई यस विषयमा बुझ्ने प्रयास गरेपनि उनी त्यसपछि हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
(जनताको आँखामा छारो हालीरहेको डीस होमका बेफाइदाहरु बारे तयार गरिएको विशेष सामाग्री हामी अर्को अंकमा प्रस्तुत गर्दैछौं ।)
Tags : ARCHIVE, COVER STORY, EXCLUSIVE, SPECIAL